Kachapu Keyboard & Gap Car Air tinyekwa Ihichapu ahịhịa nhicha Ngwa
$ 5.64 Ịgachi price $ 6.96
Kachapu Keyboard & Gap Car Air tinyekwa Ihichapu ahịhịa nhicha Ngwa na-azaghachi azụ ma na-ebu ụgbọ mmiri ozugbo ọ laghachiri na ngwaahịa.
Ihe Type: Plastik na akwa
ụdị: Seeti Crevice Nchekwa Igbe / akpa
Ihe: plastik, akwa
Agba: Green na White
Kwesịrị ekwesị maka nhicha uzuzu ụgbọ ala, keyboard.Three iberibe ahịhịa iji mepụta, nhicha nhicha
Clothcha nhicha na aziza isi nwere ike ịdị nfe, dị ọcha.
Ijikwa rọba nwere ezigbo elastic, adaba iji rụọ ọrụ.
Kachasị mma maka ibelata ibu ọrụ ụlọ.
Rịba ama: N'ihi ọdịiche dị n'etiti monitors dị iche iche, foto ahụ nwere ike ọ gaghị emetụta ụcha nke ihe ahụ. Daalụ! Ndekọ ngwugwu:
1 x nhicha nhicha
dị oke egwu ma dịkwa oke mma maka ikpochasị ngwa ngwa ụgbọ ala yana ebe ebe unyi siri ike wepu.